ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Chiller Water System Designed အကြောင်း ( အဲယားကွန်းပညာ )
Chiller Water System Designed အကြောင်း ( အဲယားကွန်းပညာ )
Chilled water sytem များတွင် အများဆုံးတွေ့ ရလေ့ရှိသည့် Circuit နှစ်မျိုးမှာ
I) Primay Only Circuit
II) Primary - Secondary Circuit သို့ (Decoupled system) တို့ဖြစ်သည်။
Primary Only Circuit
Primary Chilled Water Circuit တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိသည့် system ကို primary only system ဟုခေါ်သည်။
Primary Only Circuit/Loop သည် နားလည်ရန် ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည်။ Chilled water system တစ်ခု တွင် Chilled water pump(s) တစ်မျိုးသာ ရှိသောကြောင့် Chilled Water Circuit လည်း တစ်မျိုးသာရှိသည်။ ထို pump ကို Primary Chilled Water Pump ဟုခေါ်သည်။ ထို pump သည် Chilled water ကို AHU / FCU များဆီသို့ရောက်အောင်တွန်းပိုရသည်။ Secondary Chilled Water Pump ရှိလျှင် Primary Chilled Water Pump သည် Chilled water ကို AHU / FCU များဆီသို့ရောက်အောင်တွန်းပိုရန်မလိုပါ။ ထိုတာဝန်ကို Secondary Chilled Water Pump ကဆောင်ရွက်ပေးသည်။
Primay Only Circuit
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင် Chillers များကို တပ်ဆင်ထားလျှင် Chillers Parallel installation ဖြစ်သည်။ဘယ်ဘက်မှပုံတွင် Primary Chilled Water Pump သည် ကြိုက်သည့် Chillers နှင့်မောင်းနိုင်သည်။ ထိုသို့တပ်ဆင်ထားလျှင်များသောအားဖြင့် Primary Chilled Water Pump အရေအတွက်သည် Chiller အရေအတွက် ၁လုံး သို့ ၂ လုံး ပို၍တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ Chiller အရေအတွက် ၁လုံး ပို၍တပ်ဆင်ထားသည်ကို N+1 configuration ဟုခေါ်သည်။
ဘယ်ဘက်မှပုံတွင် Primary Chilled Water Pump များသည် သက်ဆိုင်သည့် Chiller တစ်လုံးခြင်းနှင့်သာ မောင်းနိုင်သည်။Dedicated Pumps ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့တပ်ဆင်ထားလျှင် Primary Chilled Water Pump နှင့် Chiller ကို အတွဲလိုက် မောင်းလေ့၊ ပိတ်လေ့ရှိသည်။ A pump-and-chiller pair can be turned on and off together.
Primary - Secondary System သို့ Decoupled system
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Chiller တစ်လုံးစီအတွက် Chilled Water Pump တစ်လုံးစီ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသည်။
Production Pump ကို Primary Chilled Water Pump ဟုခေါ်သည်။Distrubution ကို Secondary Chilled Water Pump ဟုခေါ်သည်။The production loop မှ Chiller များမောင်းသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် constant flow of water ဖြင့် မောင်းလေ့ရှိသည်။ (သို့သော်
( ဥပမာ 500RT (တန်၅၀၀) Chiller တစ်လုံး၏ Standard Chilled water ရေလည်ပတ်နှုန်း (Standard Chilled water flow rate ) မှာ 500RT x 2.4GPM = 1,200GPM ဖြစ်သည်။ ) သို့သော် the distribution loop မှ AHU၊FCU နှင့် CRAC unit များသည် လိုအပ်သည့် Cooling load ပေါ်တွင်မူတည်၍ two-way modulating valves ဖြင့် Chilled water flow rate ကို ပြောင်းလဲတတ်သည်။ The chillers in the production loop receiveaconstant flow of water, while the coils in the distribution loop, controlled by two-way modulating valves, receiveavariable flow of water. ထိုကြောင့် Secondary Chilled Water (Distrubution Loop) Pumps များတွင် လိုအပ်သည့် Chilled water flow rate အတိုင်းမောင်းနှင်နိုင်ရန် (Varible Speed Drive) VSD သို့ Variable Frequency Dirve (VFD) လိုအပ်သည်။
Primary Chilled Water Circuit (Production Loop)
Secondary Chilled Water Circuit (Distrubution Loop)
Primary Chilled Water Circuit နှင့် Secondary Chilled Water Circuit ကို ခွဲထားသည့် လိုင်းကို Decouples သို့ By pass Pipe line ဟုခေါ်သည်။
Dedicated Pumps at Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop) Minifolded Production Pump သို Common Header at Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop)
The production pumps သို့ Primary Chilled Water Pump သည် ရေကို return tee မှစုပ်ယူ၍ chiller အတွင်းသို့တွန်းပို့သည်။ထိုမှတဆင့် the supply tee သို့ရောက်သည်။ ထိုကြောင့် Primary Chilled Water circuit ၏ pressure losses မှာ သိပ်များပေ။ ထိုကြောင့် Primary Chilled Water Pump ၏ Pump Head မှာ နည်း လေ့ရှိသည်။ ပန့် တစ်လုံးစီသည့် သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် chiller ကိုလိုက်၍မောင်းသည်။
Primary Chilled Water Circuit နှင့် Secondary Chilled Water Circuit နှစ်မျိုးလုံးရှိသည့် system ကို primary-secondary system ဟုခေါ်သည်။ primary-secondary system တစ်ခုသည် production loop (Load Side) အတွက် ပို flexibility ရှိသည်။
Dedicated Pumps at Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop)
Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop) ၌ Dedicated Pumps များဖြင့် မောင်းလျှင် Chiller များ၏ အမျိုးအစား(type)၊ အရွယ်(size)၊ သက်တမ်း (age)နှင့် ထုပ်လုပ်သူ (manufacturers)တူသည်ဖြစ်မတူသည်ဖြစ်စေ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အမျိုးအစား(type)၊ အရွယ်(size)၊ သက်တမ်း (age)နှင့် ထုပ်လုပ်သူ (manufacturers)မတူညီသည့် Chiller များတွင် ကွဲပြားသော (different evaporator pressure drops) ရှိကြသည်။ ထိုအပြင် Dedicated Pumps နှင့် individual chiller တို့သည်အတွဲလိုက်ဖြစ်နေသောကြောင့် Dedicated Pumps တစ်လုံးပျက်သွားလျှင် သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် chiller လည်း မမောင်း နိုင်တော့ပေ။
Minifolded Production Pump သို Common Header at Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop)
Production Loop (Primary Chilled Water Circuit/Loop) တွင် Common Header ဖြင့် ပန့်များကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းသည် chiller အမျိုးအစား(type)၊ အရွယ်(size)၊ သက်တမ်း (age)နှင့် ထုပ်လုပ်သူ (manufacturers)ကို လိုက်၍ system complexity များသည်။ သို့သော် greater redundancy ရှိသည်။ ကြိုက်သည့် Chiller နှင့် သင့်လျှော်သည့် ပန့်ကို ရွှေးချယ်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ပန့်ပျက်သောကြောင့် Chiller ကိုမမောင်းနိုင်သည့်အခြေနေမျိုးမကြုံတွေနိုင်။ သို့သော် Primary Chilled Water သည် Common Header မှ တဆင့်(ပန့်မှတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ) Chiller အတွင်းသို့စီဝင်သောကြောင့် Chiller တိုင်းတွင် မှန်ကန်သော ရေလည်ပတ်နှန်း (rigth amount chilled water flow rate)ရ ရှိရန်ရေးကြီသည်။ ထိုသိုရရှိရန် balancing valve သို့ Constant Flow valve များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Common Header ဖြင့် ပန့်များ၏ ပြဿနာတစ်မျိုးမှာ ရေလည်ပတ်နှန်း မတည်ငြိမ်မူဖြစ်သည်။ Chiller ၁လုံး သို့ ၂ လုံးမောင်းနေစဉ် နောက်ထပ်Chiller တစ်လုံးမောင်းရန်လိုအပ်ပါက isolation valve ကို အရင်ဖွင့်ရသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်တွင် လက်ရှိမောင်းနေသည် Chiller များမှ ရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) သည် ၂၀% မှ ၅၀% အထိ Chiller အရွယ်အစား(size)ကို လိုက်၍ကျဆင်းနိုင်သည်။ထိုအချိန်တွင် မောင်းရမည့်ပန့်သည် မောင်းခါစဖြစ်သောကြောင့် Full Speed သို့ မရောက်နိုင်သေးပေ။ isolation valve ကို အရင်မဖွင့်ဘဲ ပန့်ကိုအရင်မောင်းပါက လက်ရှိမောင်းနေသည် Chiller များမှ ရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) သည်မြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ ထိုအခါ water hammer ပြဿနာကို ကြုံတွေနိုင်သည်။
The drawback of manifolding production pumps is that the chiller flows become hydraulically coupled again. If an isolation valve is opened beforeapump is
started, flow through the operating chillers will drop suddenly, causing potential control instability. Ifapump is started beforeavalve is open, the
operating chillers will seeamomentary flow increase, causing control instability or water hammer.
Chiller များ၏ Control Logic တာဝန်မှာ Leaving Chilled water temperature Set Point (6.7C) ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းထားရန်ဖြစ်သည်။ Leaving Chilled water temperature သည် Chiller ၏ှရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) တွင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Chiller များမှ ရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) အတက်အကျ များခြင်း၊မြန်ခြင်းသည် System တစ်ခုလုံးကို instability အခြေနေသို့ ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။
Seconadry Chilled Water Circuit သို့ distribution loop
The distribution pump သို့ Seconadry Chilled Water Pump သည် the supply tee ရေကို the load
terminals (AHU/ FCU/CRAC Unit) များဆီသို့တွန်းပိုသည်။ ထို ရေသည် AHU/ FCU/CRAC Unit မှ တဆင့် the return tee ဆီသို့ပြန်ရောက်လာကာ Primary Chilled Water Circuit ဆီသို့ရောက်သွားသည်။
Primary Chilled Water Pump နှင့် Seconadry Chilled Water Pump သည် same water ကို တွန်းပို့နေကြသော်လည်း there is no duplication of pumping energy.အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော Primary Chilled Water Pump ၏ Head ကို Primary Chilled Water Circuit ၏ Friction Loss ကို ကျော်ရုံ ဒီဇိုင်းလုပ်ထား (Select လုပ်ထား) သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Seconadry Chilled Water Pump ၏ Head ကို Seconadry Chilled Water Circuit ၏ Friction Loss ကို ကျော်ရုံ ဒီဇိုင်းလုပ်ထား (Select လုပ်ထား) သောကြောင့်ဖြစ်သည်၊
Seconadry Chilled Water Circuit ၏ ရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) သည် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး၏ Heat Load ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး၏ Heat Load သည် အချိန်နှင့် ရာသီဥတုကိုလိုက်၍ပြောင်းလဲနေသည်။ ထိုကြောင့် Seconadry Chilled Water Circuit ၏ ရေလည်ပတ်နှန်း (chilled water flow rate) သည် အချိန်နှင့် ရာသီဥတုကိုလိုက်၍ပြောင်းလဲနေသည်။ ထိုကြောင့် Seconadry Chilled Water Pump ကို variable-speed drive (VSD) သို Variable Frequency Drive (VFD) ဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်။ ထို VSD သည် part load သို့ လိုအပ်သည့် အချိန် ၌လိုအပ်သည် Speed (ie chilled water flow rate) ဖြင့် မောင်းနှင်သောကြောင့် စွမ်းအင်းချွေတာမူ(Energy Saving)လည်းဖြစ်သည်။
Their use decreases the energy savings potential from the variable-flow distribution pump. In fact, ASHRAE/IESNA Standard 90.1–1999 (Section 6.3.4.1) requires
the use of modulating two-way control valves, and thus variable water flow, in most systems. Primary-secondary systems comply with this requirement.
ဤကဲ့သို့ Common Header မှ Secondary Pump သည် High Raise Building ကဲ့သို့သော အဆောက်အဦးများအတွက်သင့်လျှော်သည်။ ဤကဲ့သို့ Individal Secondary Pump များသည် ကောလိပ်ကျောင်းကဲ့သို့သော မတူညီသည် အဆောက်အဦးများ တစ်ခုခြင်းစီ အတွက် သင့်လျှော်သည်။
Seconadry Chilled Water Pump(The distribution pump )ကို variable-speed drive ဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ supply to load ပိုက်နှင့် return to load ပိုက် ၏ ဖိအားခြားနားမူ (pressure difference between the supply- and return-water piping) ကိုလိုက် ၍variable-speed drive ကို မောင်းနှင်သည်။ ဖိအားခြားနားမူ (pressure difference ) များလျှင် variable-speed drive သည် ပန့်၏ လည်ပတ်နှုန်း(Speed)ကိုနှေးစေသည်။ ဖိအားခြားနားမူ ( differential pressure) နည်း လျှင် variable-speed drive သည် ပန့်၏ လည်ပတ်နှုန်း(Speed)ကိုမြန်စေသည်။
AHU နှင့် FCU တို့၏ the two-way valve modulates သည် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး၏ Heat Load နည်းလာလျှင် တဖြည်းဖြည်းပိတ်သည်။ ထို သို့ပိတ်မှုကြောင့် supply to load ပိုက်နှင့် return to load ပိုက်တို့အကြားတွင် system differential pressure တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်။ ထိုဖိအားခြားနားမူ ( differential pressure) ကို Seconadry Chilled Water Pump(The distribution pump )၏ speed ကို လျှော့ချရန် signal အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
In response toareduced cooling load, the two-way valve modulates closed, restricting the flow of water through the coil. This causes an
increase in system differential pressure, which can be measured and used to signalareduction in the speed of the distribution pump.
မည်သည့် the distribution pumping arrangement မျိုးဖြစ်ပါစေ primary-secondary system ကို အသုံးပြုရန်သင့်လျှော်သည်။
ကောလိပ်ကျောင်းကဲ့သို့သော မတူညီသည် အဆောက်အဦးများ တစ်ခုခြင်းစီကို ပန့်တစ်လုံးခြင်းစီဖြင့် multiple-pump configuration မျိုးဖြင့်လည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဥပမာ the east Building (A), west Building (B), and central Building (C) ဆီသို့ Separate distribution pumps (A),(B) နှင့် (C) တို့ဖြင့်မောင်းနှင်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်။
A primary advantage of this configuration is flexibility. Expanding the system can be achieved by simply adding another distribution pump to the existing plant and connecting it to the piping that runs to the new building.
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:26 AM